Izifundo zasimahla ze-Ivy League ezikwi-Intanethi ezinesiQhagamshelo seSicelo esithe ngqo
Kweli nqaku simahla Ivy League online izifundo ezivulekileyo zokufumana izicelo ezivela kubafakizicelo abanomdla kwihlabathi liphela. Eli nqaku libonisa malunga neekhosi ezingama-37 ezahlukeneyo zasimahla ngala maziko e-Ivy League kunye nezixhumanisi zesicelo ngokuthe ngqo ukuze abafundi bethu bakwazi ukufikelela ngokulula kwezi zifundo.
Amaziko e-Ivy League abalwa phakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo emhlabeni kwaye baye baphumelela ukwenza igalelo elihle kumacandelo aliqela emfundo kunye namakhondo emisebenzi, njengamayeza, ubugcisa, itekhnoloji, njl.njl., Kwaye benza ii-alumni ezaziwayo, ezinje ngoomongameli kunye nentloko ithi.
Inokukothusa into yokuba wazi ukuba amaziko afanelekileyo nala maziko e-Ivy League abonelela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi kuye nawuphina umntu onomdla ukuba athathe inxaxheba.
Malunga nezifundo zasimahla ze-Ivy League kwi-Intanethi
Yintoni i-Ivy League?
Izifundo zasimahla ze-Ivy League kwi-Intanethi
Intshayelelo kwiNzululwazi yeKhompyutha yiYunivesithi yaseHarvard
UkuCinga ngeNkcukacha-manani kwiNzululwazi yeDatha kunye noHlolo olwenziwe yiYunivesithi yaseColumbia
Isingeniso kwiSpredishithi kunye neeModeli yiYunivesithi yasePennsylvania
Intshayelelo kwiNzululwazi yezeNdalo ngekholeji yaseDartmouth
Uhlalutyo lwaBantu yiYunivesithi yasePennsylvania
Iinethiwekhi, izihlwele kunye neemarike yiYunivesithi yaseCornell
Intshayelelo kwizeMali zeNkampani yiYunivesithi yasePennsylvania
Intshayelelo kuThetha-thethwano yiYunivesithi yaseYale
Intshayelelo kwi-Akhawuntingi yezeMali yiYunivesithi yasePennsylvania
Ushishino kuqoqosho oluKhulayo ngeYunivesithi yaseHarvard
Ukuziphatha kobomi bemihla ngemihla yiYunivesithi yaseYale
Ubulungisa yiYunivesithi yaseHarvard
Isixhobo sezixhobo zomfundi wezomthetho yiYunivesithi yaseYale
I-Microeconomics: Amandla eMakethi yiYunivesithi yasePennsylvania
Ithiyori yoMdlalo yiYunivesithi yaseYale
Intshayelelo kwiNtengiso yeYunivesithi yasePennsylvania
Ukuthengisa ngentsholongwane kunye nendlela yokwenza izinto eziSasazekayo kwiYunivesithi yasePennsylvania
Ulwaziso lweDyunivesithi yasePennsylvania
Intshayelelo kuMculo weClassical yiYunivesithi yaseYale
Uyilo: Ukudalwa kwezinto zakudala kuMbutho yiYunivesithi yasePennsylvania
Umculo kunye neNtsebenzo yeNtlalontle yeYunivesithi yaseYale
Imifanekiso yoyilo lweYunivesithi yaseHarvard
Imigaqo ye-Biochemistry yiYunivesithi yaseHarvard
Ukunxibelelana notshintsho lweMozulu kunye neMpilo yiYunivesithi yaseYale
I-Backard Metereology: Inzululwazi yeMozulu yiYunivesithi yaseCornell
Ubudlelwane kunye neAstrophysics yiYunivesithi yaseCornell
Intshayelelo yoMhlaza wamabele yiYunivesithi yaseYale
Isiseko soPhuculo lweSoftware yiDyunivesithi yasePennsylvania
Itekhnoloji yeKhompyuter ngaphakathi kwe-Smartphone yakho yiYunivesithi yaseCornell
Iimodeli zedatha kunye nezigqibo kuLuhlu lweShishini ngeYunivesithi yaseColumbia
Uhlalutyo oluPhezulu lweDatha eMiselweyo yiYunivesithi yaseHarvard
Iindlela zobungakanani beBiology yiYunivesithi yaseHarvard
IsiNgesi kuPhuhliso loMsebenzi yiYunivesithi yasePennsylvania
Imimangaliso ye-Egypt yakudala yiYunivesithi yasePennsylvania
Uhlalutyo ePython yiYunivesithi yaseColumbia
IFinTech: Iziseko, iiNtlawulo kunye neMimiselo yiYunivesithi yasePennsylvania
Intshayelelo ngokunokwenzeka kwiYunivesithi yaseHarvard
Uluhlu lweeYunivesithi zeIvy League
Izikolo zeIvy League ezikwi-Intanethi
Isiphelo kwiikhosi ze-Ivy League zasimahla kwi-Intanethi
Eli nqaku libonelela ngeenkcukacha eziluncedo kwiikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezibonelelwa ngala maziko e-Ivy League kunye nokunxibelelana ngqo kwezicelo, iikhosi zidweliswe ngeenkcukacha kunye namakhonkco ukuze ubazi Ungaqhubeka nokukhetha enye ebonisa umdla wakho kwaye usebenzise ngokufanelekileyo.
Iikhosi ze-Intanethi zisimahla kwaye zinikezelwa ngamaziko e-Ivy League ke oko kuya kuba zizifundo ezinamandla kwaye zifundiswe ngoonjingalwazi abaziwayo abaya kukuxhobisa ngezakhono, bakomelele ngolwazi kwaye bakunike isikhokelo ngenyathelo ngenyathelo kwinjongo yakho.
Kwangoko, sibhengeze ezinye iikhosi zasimahla kwi-Intanethi zeYunivesithi yasePrinceton njengoko iyunivesithi lelinye lamaziko amakhulu e-Ivy e-USA.
Iikhosi zasimahla ze-Ivy League ezikwi-Intanethi azikho kwezinye ezimbalwa ezikhethiweyo, yeyokuba wonke umntu kwikona nganye yomhlaba athathe inxaxheba ukuba unonxibelelwano oluzinzileyo lwe-intanethi kunye nelaptop, ikhompyuter okanye i-smartphone onokuthi ube nakho ukufikelela kuyo ufunda nayiphi na ikhosi oyithandayo ye-Ivy League kwi-Intanethi.
Izicelo zezi khosi zeligi ze-Ivy zigqityiwe kwi-intanethi simahla njenge iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiYunivesithi yaseHarvard kwaye i iikhosi zasimahla ezinikezelwa esidlangalaleni kwiYunivesithi yaseYale.
Ngaphandle kwezi zikolo zeligi ye-Ivy, ezinye izikolo ezikumgangatho ophezulu ezingezizo i-Ivy yeligi zisanikezela ngezifundo ezikwi-Intanethi ekufuneka ujonge nazo, ezinje ngezi zifundo zasimahla kwi-Intanethi ezibonelelwa yiYunivesithi yaseStanford kunye nenani iikhosi ezinikezelwa kwi-Intanethi yiYunivesithi yaseToronto eCanada.
Ivy League liqela leeyunivesithi zabucala ezisibhozo eMantla mpuma eUnited States ezinemigangatho yokugqwesa kwizifundo, ukukhetha ukwamkelwa kunye nobungcali kwezentlalo. Izikolo ezisibhozo zezi; IYunivesithi yaseBrown, iYunivesithi yaseColumbia, iYunivesithi yaseCornell, iYunivesithi yaseDartmouth, iYunivesithi yaseHarvard, iYunivesithi yasePennsylvania, iYunivesithi yasePrinceton kunye neYunivesithi yaseYale.
Ezi zikolo ziphakathi kwezona zikolo zidumileyo nezona zibalaseleyo emhlabeni, ezikhetheke kakhulu kwaye kunzima kakhulu ukungena kuzo kodwa iindaba ezimnandi zezokuba zibonelela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi ezahlukeneyo amaqonga okufunda online wonke umntu, nokuba uqeshiwe, usebenza ngokuzimeleyo, umfundi okanye utitshala, ungathatha inxaxheba kwezi zifundo kwaye ulwazi kunye nobuchule obufunyenweyo buya kuba luncedo kuwe.
Izifundo zasimahla ezikwi-Ivy League kwi-Intanethi ziya kunceda ukubrasha izakhono zakho esele zikho, zikuncede ekuvuleleni ikhondo lomsebenzi omtsha, wandise ulwazi lwakho kwezinye iinkalo zokufunda, ndikuxhobise ngezakhono nolwazi olunokukunceda ukonyuselwa kunye nomsebenzi nokufumana Ulwazi olongezelelweyo lukutyhalela kwileli yokufunda.
Kulungile, lixesha lokuba ungene ngesihloko esiphambili. Thatha ixesha lakho lokufunda ngeenkcukacha zekhosi nganye.
Intshayelelo yoMculo oDala ngeYunivesithi yaseYale,
I-Metereology yangasemva: Inzululwazi yeMozulu yiYunivesithi yaseCornell
Ixesha: Iiveki ezili-12
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-6 ukuya kwezi-18 ngeveki
Ngena kwi Ihlabathi leNzululwazi yeDatha ngale khosi ye-Ivy yeligi yasimahla kwi-intanethi apho uza kufunda ukusebenzisa indlela yokucinga yokuqokelela kunye nokuhlalutya idatha, ukwazi ukuyila idatha eqokelelweyo kwaye uqhelane neendlela ezinxulumene nazo kubuchwephesha besayensi.
Ixesha: Iiveki ezili-5
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-7 ukuya kwezi-10 ngeveki
Ukufumana izakhono kwiNkqubo yokuLungiswa kweMigca kunye neMicrosoft Excel xa ufunda le khosi ye-Ivy yeligi yasimahla ekhompyutheni, Intshayelelo kwiSpredishithi kunye neeModeli, funda ukusebenzisa iimodeli zespredishithi ukuhlalutya idatha enokuthi isetyenziselwe ukuqikelela impumelelo kunye nezisombululo zeshishini elincinci okanye elikhulu okanye iprojekthi.
Phantse iiyure ezi-5 zokugqiba
Le khosi ye-Ivy yeligi yasimahla iya kukunceda ufumane ulwazi olusisiseko lwesayensi esingqongileyo kunye nendlela echaphazeleka ngayo ngabantu, vuleleka imiba yokusingqongileyo Sijongene kwaye sifunde indlela yokujongana nale micimbi ngemigaqo yesayensi kunye nendlela yokuyisebenzisa kwiinkqubo zendalo.
Ixesha: Iiveki ezili-4
Le khosi ye-Ivy yeligi yindlela eqhutywa yidatha yokulawula abantu emsebenzini ukuvelisa iziphumo ezifanelekileyo njengoko uya kufumana izakhono ulawulo, uhlalutyo kunye nentsebenziswano. Uya kuba nakho ukusebenzisa obu buchule ukukhetha elona qela libalaseleyo leprojekthi okanye umqeshwa kwisikhundla kumbutho.
Ubude bexesha: 4weeks
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezili-9 ngeveki
Ndinomdla wokwazi ukuba umhlaba wethu unxibelelana njani, uqoqosho kunye netekhnoloji? Eli ke likhondo ekufuneka ulithathile njengoko uza kuvavanya Unxibelelwano lwangoku ubomi ngokuvavanywa kwethiyori yomdlalo, ukosuleleka kwezentlalo, ubume be-intanethi, kunye nokusasazeka kwamandla oluntu kunye nokuthandwa.
Ixesha: Iiveki ezili-10
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-4 ukuya kwezi-5 ngeveki
Funda iziseko zezemali kwaye ugxininise kwisicelo sabo kwiimeko ezahlukeneyo zehlabathi lokwenyani ezibandakanya ezemali, ukuthatha izigqibo kwiziko kunye nokulamla kwezemali.
Ngale khosi ye-Ivy League yasimahla kwi-Intanethi, uya kufumana izakhono kuhlalutyo lokuhamba kwemali, ukwenza izigqibo, imali yeziko kunye nokuphuma kwemali ngesaphulelo.
Phantse iiyure ezili-12 zokugqiba.
Abathethathethwano nabo banegalelo elikhulu kwimpumelelo yombutho yiyo loo nto iinkampani eziphambili zisiya kwaye zixabise abathethathethwano abalungileyo.
Ngale khosi yasimahla ngoku Intshayelelo kuThetha-thethwano, Uya kujonga iimfihlelo kunye nemigaqo yothethathethwano olunempumelelo.
Phantse iiyure ezili-27 zokugqiba.
Ngale khosi yasimahla ye-Ivy yeligi, uya kuyifumana izakhono zobugcisa zokuhlalutya iingxelo zemali kunye nokuxela okusetyenziselwa uhlalutyo lwemali kwaye ekugqibeleni kwekhosi, uya kuba nakho ukuchonga kunye nokufunda iingxelo zemali ezifanayo eziyingxelo yengeniso, ibhalansi kunye nengxelo yokuhamba kwemali.
Uqoqosho oluhlumayo luhlala luhamba kwiingxaki zentlalo, le khosi ye-Ivy yeligi ekwi-Intanethi iya kukufundisa ukuba kanjani ukurhweba kunye nokwenza izinto ezintsha Ukujongana nezi ngxaki kunye nokufumana izakhono ezibalulekileyo ekuchongeni amathuba oosomashishini kwiimarike ezikhulayo ngokukhawuleza.
Ixesha: Iiveki ezili-6
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-3 ukuya kwezi-5 ngeveki
Uziva njani umntu ngamnye, uyayithiya okanye uyayithanda? Kutheni bevakalelwa ngolu hlobo? Ivelaphi le mvakalelo?
Zuza iimpendulo zale mibuzo ingentla ngokujonga le khosi yasimahla ye-Ivy League kwi-Intanethi isayikholoji yokuziphatha. Ukufumana ulwazi malunga nokuba yintoni isimilo kunye nokuba sibachaphazela njani abantu.
Ubude bexesha: iveki enye
Phantse iiyure ezi-25 zokugqiba
Isakhono sokucacisa ngcono kwaye uvavanye iingxoxo zefilosofi kwaye ubuze iingxoxo zefilosofi ziza kuphela xa ungene kule khosi ye-Ivy League yasimahla njengoko izisa abafundi ifilosofi yokuziphatha kunye nezopolitiko.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-3 ukuya kwezi-6 ngeveki
Le khosi inceda abafundi abanqwenela ukuba ngumthetho njengoko ibalungiselela uhambo oluya phambili ngokwakha isiseko esifunekayo ukuze baphumelele kwisikolo somthetho.
Le khosi ifana nesiqalo sokuqala saba bafundi sibazisa ngeekhonsepthi, isigama kunye nabahlohli bezomthetho ngenxa yoko baya kuba ulwazi olusisiseko lomthetho ngaphambi kokuntywila kumhlaba ophambili.
Ixesha: Iiveki ezili-3
Phantse iiyure ezi-21 zokugqiba
Uqoqosho lusingqongile kwaye luyasichaphazela yonke imihla kwaye luchaphazela ngokulinganayo izigqibo zethu zemihla ngemihla kunye nendlela esisabela ngayo kumaxabiso entengiso. Thatha le khosi ye-Ivy yeligi ukuze ufumane isakhono se Uhlalutyo lwezoqoqosho ngokucinga nzulu uya kuba nakho ukwenza isigqibo ngexabiso lemveliso okanye inkonzo, yombutho, oya kuthi ulingane abathengi ngokulinganayo.
Phantse iiyure ezi-9 zokugqiba
Ukufumana izakhono zokucinga ezicwangcisiweyo kule khosi yokuqala, Umdlalo weMidlalo, funda isigama esichaphazelekayo kwaye ufumane izimvo ezizodwa ezinje ngokulawula, ukulingana kweNash, ukuthembeka, ulwazi olungalinganiyo kunye nezinye izimvo ezibalulekileyo ezinokuthi zisetyenziswe kuqoqosho nakwezopolitiko.
Ukufumana ulwazi olusisiseko lwe izicwangciso zentengiso nezentengiso, funda izakhono ezibalulekileyo ezichaphazelekayo ukuze ube ngumthengisi olungileyo kunye nendlela yokwanelisa abathengi.
Phantse iiyure ezi-10 zokugqiba
Ngelixa uphawu oluthile kunye neemveliso zibetha, ezinye ziyajikeleza kwaye ngelixa ezinye izimvo zichuma ezinye ziyaphela kwinkqubela phambili okanye impumelelo kwezi zimvo, iimveliso kunye neemveliso ikakhulu zixhomekeke kwindlela ezithengiswa ngayo.
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi ibhenca abafundi izimvo ezingasemva intengiso yentsholongwane kwaye ungayisebenzisa njani le mibono ukwenza ukuba izimvo zakho zentengiso zisebenze, zichume okanye zibethe.
Phantse iiyure ezi-4 zokugqiba
Le yikhosi emangalisayo apho ufunda ukuba ungayisebenzisa kanjani ubuchule bezinto zomdlalo Uyilo lomdlalo wedijithali kwiingxaki ezingezizo zomdlalo ezinje ngeshishini. Ikhosi iya kuphinda ikuncede ufumane izakhono kwizengqondo, uyilo lomdlalo kunye nentengiso.
Phantse iiyure ezi-20 zokugqiba
Umculo weklasikhi uyamangalisa ngokwenene kwaye ngokuntywila kule khosi ufumana ukuphonononga amagcisa awaziwayo kunye nemisebenzi yawo efana neBach fugues, Puccini opera kunye neMozart symphonies kunye nezinye izimanga zomculo weklasikhi.
Ixesha: Iiveki ezili-9
Phantse iiyure ezi-39 zokugqiba
Ukuphucula ukusebenza koyilo Ngethiyori kunye nokuziqhelanisa nokubonelela kule khosi ejolise ekwenzeni abafundi abanomdla babengcono ekuyileni izinto ezinjengokwakha, imizobo, iimpahla njl.
Phantse iiyure ezi-22 zokugqiba
Le khosi yasimahla ye-Ivy yeligi ekwi-intanethi umculo kunye nezenzo zentlalo kubandakanya ukuphanda kwiseti yezimvo kwifilosofi yobuhle; ingxoxo malunga nenkululeko, imibutho yoluntu kunye nokuvavanya umbono wokuba imvumi, umzobi luluntu olubalulekileyo olunendima ebalulekileyo ekufuneka eyidlalile eluntwini.
Phantse iiyure ezi-30 zokugqiba
Uyilo loyilo lubalulekile nokuba kungumsebenzi wobungcali okanye isifundo semfundo, le khosi ye-Ivy League ekwi-intanethi ikufundisa imigaqo esisiseko yoyilo kwaye ngokufunda ezinye zezona zakhiwo zibalulekileyo kwimbali uya kuba nakho ukufunda, ukuhlalutya kunye nokuqonda iindlela ezahlukeneyo zokumelwa kokwakhiwa.
nale ikhosi yokuqala kwi-biochemistry, Uya kufunda iimolekyuli zobomi, ubume kunye nokusebenza kweebhloko zokwakha zeekhemikhali kwaye uphonononge ezinye izinto ezenziwe ngemichiza yobomi.
Ixesha: Iiveki ezili-15
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-4 ukuya kwezi-6 ngeveki
Funda indlela yokuqonda kunye nokudlulisela unxibelelwano kubaphulaphuli xa uxoxa Iziphumo zotshintsho lwemozulu kwimpilo yabantu, funda ukukhuthaza nokukhuthaza aba baphulaphuli ngamanyathelo ekufuneka bewathathe malunga nemiphumo yezempilo yotshintsho lwemozulu.
Kuyamangalisa indlela usosayensi aqikelela ngayo imozulu kwaye ivele ngokuchanekileyo, nali ithuba lakho lokuzifundisa inzululwazi yemozulu kwaye nawe unokukwazi ukuxelela imozulu ukuba iza kuba njani ngokujonga ngaphandle kwefestile yakho.
Kuya kufuneka ube unemibuzo emininzi malunga neenkwenkwezi, ungafuna ukwazi amagama eenkwenkwezi esibhakabhakeni kunye nazo zonke.
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi ivuliwe ulwalamano kunye ne-astrophysics ungaphenduli nje le mibuzo iqhelekileyo yeenkwenkwezi, kodwa kufuneka uphinde uphonononge olo nxibelelwano luchazayo phakathi kweenkwenkwezi kunye no-Einstein ithiyori yolwalamano.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-4 ukuya kwezi-8 ngeveki
Ukufumana ulwazi olusisiseko ngomhlaza wamabele ukusuka kwibhayoloji yayo ukuya kwisifo, kuthintelo kunye nonyango kunye nokuphonononga izixhobo zokwenza ulwazi kunye nokufundisa abanye ngesi sifo.
Ixesha: Iiveki ezili-7
Phantse iiyure ezi-12 zokugqiba
Abaphuhlisi besoftware bakwimfuno ephezulu ziinkampani zangoku, qala uhambo lwakho ukuya uphuhliso lwesoftwe ngale khosi yasimahla ye-Ivy League ekwi-intanethi yokufunda iilwimi ezinje ngeJava kunye nezinye iinkqubo zophuhliso lwesoftware yale mihla.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-6 ukuya kwezi-8 ngeveki
Ii-smartphones zethu zisebenza ngokukhawuleza ngenxa yeprosesa kunye nenye itekhnoloji ehlelwe ngaphakathi kuyo, le khosi ye-ivy yeligi iyaqhubeka iteknoloji yekhompyutha iphonononga obu buchwephesha, ukuba zisebenza njani kunye nezinye iindlela ezenza ukuba zibaleke ngokukhawuleza okukhulu.
Uya kufunda kwakhona indlela yokuyila ikhompyuter encinci kunye neendlela eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukwenza iikhompyuter ngokukhawuleza.
Uhlalutyo lwedatha lunokusetyenziselwa ukwenza izigqibo kwishishini ngexesha lesigqibo esinzima sokwenza ishishini, le khosi iya kukuxhobisa nge izixhobo ezisisiseko kunye nezakhono zokusebenzisa idatha kwiimeko ezinjalo.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-8 ukuya kwezi-10 ngeveki
Le khosi yasimahla igxile ekuxhobiseni abafundi ngeendlela ezininzi ezisetyenziswa rhoqo kwiifayile ze- Uhlalutyo lwedatha ephezulu.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-2 ukuya kwezi-4 ngeveki
Njenge-biologist, umsebenzi wezempilo okanye umfundi wezonyango ofuna ukufunda ukwenza le khosi ikwi-Intanethi yeyakho, uya kuthi funda inkqubo yokwazisa kunye nohlalutyo lwedatha kwiMATLAB kunye nesicelo sebhayoloji kunye neyeza.
Ukufunda le khosi kuya kukuxhobisa izakhono ezilungileyo zonxibelelwano zesiNgesi, ncedisa ekwakheni isigama sakho kwaye uphucule izakhono zakho zolwimi konke ukufezekisa iinjongo zakho zobungcali.
Phantse iiyure ezi-40 zokugqiba
I-Egypt yamandulo igcwele imimangaliso kwaye uninzi lwabantu belusoloko lufuna ukuphonononga le mimangaliso, nali ithuba lakho funda konke onako ngeYiputa yamandulo kwaye ugcwalise ukwazi kwakho malunga nomhlaba weephiramidi ezinkulu.
Le yikhosi yokuqala ye-Ivy yeligi efundisa abafundi i iziseko zenkqubo kwiPython, indlela yokuyisebenzisa ukujongana nedatha kunye nokuphuhlisa amandla okuhlalutya idatha kunye nokwenza izigqibo eziqhutywa yidatha.
Enkosi kubudala be-intanethi obakhokelela kubuchwephesha bezemali njengesiseko sokuhlawula, le khosi yasimahla ye-Ivy League ixoxa Iitekhnoloji ezahlukeneyo zezemali, siqonde indlela entsonkothileyo yeendlela zokuhlawula kunye nemimiselo yezemali.
Unokwenzeka lulwimi olubalulekileyo kunye neseti yezixhobo zokuqonda idatha, ukungahleli kunye nokungaqiniseki okunokuthi kusetyenziswe kuwo nawuphi na umthombo wolwazi onale micimbi kwaye nali ithuba lakho lokuyifunda kwaye uqalise ukwenza uqikelelo olusebenzayo.
Ukuzibophelela kwexesha: iiyure ezi-5 ukuya kwezi-10 ngeveki
Ezi zezi zifundo ze-37 ze-Ivy League ezikwi-Intanethi onokuzifundela simahla xa ukhululekile kwisingqengqelo sakho. Faka isicelo kwaye uqalise ukumila kwaye wandise ulwazi lwakho namhlanje.
Kukho iiyunivesithi ezi-8 kuphela ezenza iiyunivesithi ze-Ivy League kwaye zonke ezi yunivesithi zibekwe kwinxalenye eseMantla-mpuma ye-United States kwaye zithathwa njengezona yunivesithi zidumileyo kungekuphela e-US kodwa kwihlabathi liphela.
Apha ngezantsi luluhlu lwazo zonke iiyunivesithi zeIvy League ezisibhozo;
Zonke izikolo ze-Ivy League eziyi-8 zineenkqubo ezikwi-Intanethi kunye nezifundo kwaye zonke zinamaphepha ahlukeneyo kwiwebhusayithi yazo ezinikezelweyo kwiinkqubo ezikwi-Intanethi.
Apha ngezantsi luluhlu lwazo zonke izikolo ze-Ivy League ezikwi-intanethi kunye neewebhu ezihambelana nazo;
IYunivesithi yasePennsylvania ekwi-Intanethi
IYunivesithi yasePrinceton kwi-Intanethi
IYunivesithi yaseHarvard kwi-Intanethi
IYunivesithi yaseYale ekwi-Intanethi
IYunivesithi yaseCornell kwi-Intanethi
Ikholeji yaseDartmouth ekwi-Intanethi
IYunivesithi yaseBrown ekwi-Intanethi
IYunivesithi yaseColumbia ekwi-Intanethi
Amaziko e-Ivy League axabisa kakhulu, kwaye ayinguye wonke umntu onokukufumana kodwa ngenxa ye-intanethi kunye nokuthakazelelwa kwala maziko ungafunda ezinye zezifundo zawo kwi-intanethi kwaye simahla eli lithuba lakho lokufumana eso sakhono uhlala usifuna okanye usandisa ulwazi lwakho. kwenye intsimi.
Kuya kufuneka uyazi ukuba ezinye zeekhosi zasimahla ezikwi-intanethi ezi zinikezelwa zizikolo zeligi ze-Ivy ziza nesatifikethi sokukhetha ngokuzithandela ekupheleni. Unokuthatha isigqibo sokuba uhlawule okanye hayi.
Akukho mda kwimali yezi zifundo onokuzithatha, ungathatha kangangoko unako kwaye akunamsebenzi ukuba zeziphi na izikolo ze-Ivy League ezibonelela ngezi zifundo.
Izifundo zasimahla zeIvy LeagueIzifundo zasimahla ze-ivy ze-intanethiIligi yeligiIikhosi ze-Ivy LeagueIziko le-Ivy LeagueIikhosi ze-Ivy League kwi-IntanethiIzikolo zeligi yeIvyIiYunivesithi zeYy League
Post Previous:Iikhosi ezingama-20 eziPhezulu zeDyunivesithi kwiNyuvesi yaBafundi
Okulandelayo Post:Uluhlu lwe-29 Federal Polytechnics eNigeria eneenkcukacha ezipheleleyo
Pingback: Uluhlu lweZikolo ze-Ivy League ezineMirhumo yazo yangoku ngo-2021
Website Inkampani uthi:
Meyi 4, 2021 kwi-11: 30
Ndwendwela iwebhusayithi yethu yenkampani ukuze ufumane ezona zithembiso zibalaseleyo kwimfundo yakho yasekholejini.